नांगो नाच किन देखाउँछौ ? | NepalDut
देउवा निवासमा नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीको सन्देश दिएर गएको दाबी
सकियो वार्ता, भएन सहमति
प्रचण्ड, खनाल र नेपाल राष्ट्रपति निवासमा
महाअभियोग लगाउन लागेकाले संसद अन्त्य : प्रधानमन्त्री
दाहालसँग ओलीले भने : कारवाही गर्नुस्, अर्को पार्टी घोषणा गर्छु
नांगो नाच किन देखाउँछौ ?
कमल बुढा काठमाडौं
वैशाख ७ गते २०७६
बिद्धुतिय अपराध ऐन अन्तरगत मुद्दा खेपिरहेका पत्रकार अर्जुन गिरी रिहा भएपछि बिद्रोही नेकपा समर्थित पत्रकार प्रकाश डुम्रे, हिम बिस्ट, सिर्जना तिम्सिना, र ओम हमालले लेखेका फेसबुक स्टाटस देखेर दया लाग्यो । ४ जनाले लेखेको एउटै खाले स्टाटसमा आफु समर्थित पत्रकार र अर्जुन गिरीको मुद्दामा पत्रकार महासंघ र सरोकारवाला निकायले भेदभाव गरेको पूर्वाग्रही भाव ब्यक्त गरिएको छ ।
मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो पटक पक्राउ परेका पत्रकार गणेश बिक, गोपाल चन्द, कर्ण बिक जितेन्द्र महर्जन, राजेन्द्र अधिकारी र अर्जुन गिरीको सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघ र सरोकारवाला अन्य पत्रकार संगठनहरुको धारणा एकै थियो । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाएका र महासंघको आन्दोलनमा सहभागी हुने र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने गरेकै हुन् ।
आफैले सचेत पहलकदमी नलिई, आन्दोलनको एजेण्डा तय नगरी वा सरोकारवाला निकायले थालेको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा आफै सहभागि नभई गरिने कोरा वक्तव्यवाजीको केहि अर्थ रहदैन ।
जहासम्म ठोस पहलको कुरा छ । गणेश बिक र कर्ण बिक पक्राउ पर्दा महासंघ जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र उत्तिकै लागेकै हुन् । हामी आफै पत्रकार महासंघका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य जन्मदेब जैशी र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका तर्फबाट म बिकलाई काठमाडौँ ल्याएको २४ घण्टा पनि नाबितिकै टेकु प्रहरी परिसरका प्रमुखलाई भेटघाट गरी मुद्दालाई सहज बनाउने र बिकलाई चाडो रिहा गर्नेबारे ठोस पहल गरेका थियौ । गोपाल चन्द गिरफ्तार पर्दा पनि महासंघले आन्दोलन सुरु गरेकै थियो । हामि स्वयंले पनि प्रत्यक्ष भेटेरै सम्बन्धित निकाय र प्रहरी प्रमुखसँग उनको रिहाइका निम्ति जोडदार पहल गरेकै हो । फरक यत्ति मात्र हो की उनीहरु दुई जना रिहा हुँदा सस्तो प्रचार र साख्खै बन्नका निम्ति अबिर र खादा ओढाउन टेकु भने गइएन ।
कालिकोटका पत्रकार कर्ण बिकको गिरफ्तारीपछि तत्काल जिल्लाका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम बन्द गरेरै महासंघ जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र र पत्रकार साथीहरु आन्दोलनमा उत्रिएकै हुन् । महासंघ केन्द्रले मिसन टोली बनाएर कालिकोट पठाउने निर्णय गरेकै थियो । महासंघको उक्त निर्णयपछि टोली जानै लाग्दा उनलाई रिहा गरिएको यतार्थ किन लुकाउने ? महर्जनको मुद्दामा महासंघको तर्फबाट जन्मदेब जैशीले सर्बोच्चमा रिट हाल्नु भएको छ ।
जैशी महासंघको केन्द्रीय सदस्य मात्र नभएर क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हो । त्यो हिसाबले उहाँ आफु सम्बद्ध राजनीतिक बिचार र आस्था प्रति प्रतिबद्ध भएर पनि महासंघको तर्फबाट अख्तियारी लिएर महर्जनका पक्षमा रिट दायर गर्नुभएको हो । हामीले गरेका यि पहल र कामहरुलाई तिमीहरुको दृष्टिले देख्न सकेन । वा उल्लेख गर्न लाज लाग्यो ? हिजो प्रकाश डुम्रे पक्राउ पर्दा पनि यिनै जन्मदेब जैशिले रिट हालेर रिहाई गराइएको कुरा बिर्सियौ ?
अहिले पक्राउ परेका पत्रकार गणेश, गोपाल, कर्ण, राजेन्द्र र अर्जुनका बारेमा कुरा एकै हो । यसमा कसैको पनि फरक मत हुनु हुदैन । रिहा नभएका महर्जन बाहेक रिहा भएका राजेन्द्र र कर्ण तारेखमा छुटेको हैनन् भने अरु सबै साथीहरु तारेखमै रिहा भएका हुन् । तारेख अरु साथीहरुले पनि धाइरहनु भएको छ र अर्जुनले पनि लिनु नै पर्ने बाध्यता छ । अनि कसरी तिमीहरुले अर्जुन र अरु साथीहरुका बारेमा महासंघले विभेद गरेको देख्यौ ? अब बाँकी हिरासतमा रहेका पत्रकार साथीहरुलाई रिहा गराउन पत्रकार महासंघ र हामि सबै आन्दोलनमा छौं। तिमीहरु पनि आउ हामिसंगै सडकमा अनि मात्र तिम्रा दुला भित्रका कोरा असन्तुष्टिको अर्थ रहन्छ ।
बिरोधका निम्ति बिरोध गर्नु र हदैसम्मको पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु भनेको आफ्नो खस्किदो औचित्यहिन हैसियत र तल्लोस्तरको औकात देखाउनु मात्र हो । तिमीहरुले दुला हित्रबाट लेखेका स्टाटस आफुले केही काम गर्न नसकेपछि अरुले गरेका उल्लेखनीय कामलाई ओझेलमा पार्न र आफ्नो छटपटी पोख्न गोयबल्स शैली अपनाइएको बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । यसको मतलब तिमीहरुसँग नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा प्रचार मोर्चा मार्फत भूमिका निर्वाह गर्न, जनपक्षीय पत्रकारिता गर्न र पत्रकार साथीहरुमाथि राज्यले गरेको दमनको प्रतिरोध गर्ने कुनै एजेण्डा र योजना नै छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
जहासम्म तिमीहरुको कुरा छ । तिमीहरु आफै आन्दोलनका निम्ति सडकमा किन आउदैनौ ? गिरफ्तार साथीहरुको रिहाइका निम्ति पहल गर्न सरोकारवाला सबै निकाय र सम्बन्धित प्रहरी प्रमुखहरुसँग भेटघाट छलफल गर्न किन सक्दैनौ ? वा मुद्दा खारेज गर्न पहलकदमी लिनुको सट्टा किन दुला पसेर बेकामका बक्तब्यवाजी गर्ने र फेसबुकममा रोइलो गर्ने गरेका छौ ? आफैले सचेत पहलकदमी नलिई, आन्दोलनको एजेण्डा तय नगरी वा सरोकारवाला निकायले थालेको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा आफै सहभागि नभई गरिने कोरा वक्तव्यवाजीको केहि अर्थ रहदैन ।
तिमीहरु लुकेर बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तिमीहरु आफुलाई पत्रकार हौँ भन्छौ भने तिमीहरुले जुनसुकै बिचार र आस्थालाई अगालेपनि अहिलेको दुनियामा कसैले केही गर्न सक्दैनन् । राजनीतिक आस्थाका हिसाबले राज्यले धरपकड गर्यो भने तिमीहरु कृष्णसेन बन्न तयार हुनुपर्छ लुकेर कायरता प्रस्तुत गर्नु हुदैन । बिद्रोही नेकपा समर्थित भएकै कारण अहिले नै लुकेर बस्नुपर्ने तिमीहरु न बन्दुक लिएर लडिरहेका शैन्य लडाकु हौ न त पार्टीको स्थायी, बिपी र केन्द्रीय समितिका सदस्य नै हौ ।
यसरी निरन्तर वाइयात र कुतर्क गर्दै सिमा नाघेर आफु मात्र ठिक र सारा दुनियाँ बेठिक भन्दै पूर्वाग्रह पेश गरेर तिमीहरु न राजनीतिक प्राणी बन्न सक्छौ न त पत्रकार र सामाजिक व्यक्ति नै, यो त नाङ्गो नाच देखाउनु सिवाय अरु केहि हुन् सक्दैन ।दुला भित्र पसेर लुकेर न त पार्टी र आन्दोलनका पक्षमा प्रचार-प्रसार हुन्छ न त परिवर्तनका पक्षमा लेख्न बोल्न सक्ने संगठन तयार पार्न सकिन्छ ।
यो बेला भनेको शहरमा, सडकमा बसेर मोर्चा सम्हाल्ने बेला हो । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन फुटाएर केहि नेताहरुलाई आफ्नो अनुकूलताको निर्णय गर्न लगाएर तिमीहरुले अर्को संगठन बनाएको पनि एक वर्ष पुरा भैसकेको छ । यो अबधिमा तिमीहरुले के नै गर्न सकेका छौ र ? त्यो त दुनियाले देखेकै छन् । हामी सरकारको हिट लिस्टमा पर्दा पनि निर्भिकतापूर्वक जनताको पक्षमा कलम चलाएर आफ्नो मोर्चा सम्हालेकै छौं ।
केशव पाठकलाई खेलकुद पत्रकारिता सम्मान
फेरि फेसबुक लाइभ गरेर आत्महत्या
बागलुङका मृतकको शव व्यवस्थापन
सिस्टम ह्याक र ब्याज आफ्नो खातामा राख्ने बैंक प्रबन्धकलाई मुद्दा
क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकमा कोभिड १९ पुष्टि
झरनाको चिसो पानी…
यसपालि कक्षा ११ को पनि बोर्ड परीक्षा नहुने
भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा रहेका २९ वर्षीय युवकको मृत्यु
लघुकथा: सच्चा गुरु
पत्तै नपाई संक्रमित, थाहै नपाई निको